Faahfaahin ka soo baxay markabka la afduubtay iyo ciidamada Puntland oo weerar ku ah – dillanews
Home / Warar / Faahfaahin ka soo baxay markabka la afduubtay iyo ciidamada Puntland oo weerar ku ah
Wararka ka imanaya dowlad goboleedka Puntland ayaa sheegaya in ciidamada Puntland ay bilaabeen qorshe ay ku doonayaan inay ku soo furtaan markab ka afduubtay oo ku sugan meel u dhow xeebta Caluula.
Guddoomiyaha degmada Caluula Cali-Shire Maxamuud Cismaan ayaa sheegay in dadka soo afduubtay markabkaasi ay yihiin burcad badeed, hase yeeshee qof sheegtay inuu ka mid yahay dadka markabka soo qabsaday ayaa VOA u sheegay inay yihiin kalluumaysato.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in markabkan ARIS 13 ayaa kasoo shiraacday magaalada Jabuuti waxaana uu u socday Muqdishu markii shalay la afduubay.
Mas’uuliyiinta la socda markabkaasi ayaa sheegay inay la socdaan toddoba qof oo shaqaale ah oo dhammaantood u dhashay dalka Sirilanka.
Xeebaha dalka Soomaaliya ayaa muddo labo sano kabadan aan wax markab ah lagu afduubin iyadoo ciidamo ka socda gaashaanbuurta Nato iyo dalal badan oo caalamka ay ilaalo ka hayaan xeebaha dalka Soomaaliya.
Boqolaal dhalinyaro Soomaali ah ayaa waxaa ay ku xiran yihiin xabsiyo ku yaal dalal badan oo caalamka ah iyadoo qaarkood ay ku xukuman yihiin xabsi daa’in halka qaar kalana lagu xukumay xabsiyo u dhexeeya 5 sano illaa iyo 30 sano.
Previous Hal Askari Oo Ku Dhintay Duleedka Degmada Dilla Goor Boob Lagu Bilaabay Raashin Loo Qeybinayay Dadka Abaaraha..